KARIERA ANJOZOROBE : Ho hita amin’ny alarobia ho avy izao ny fahamarinan’ny fitsarana | NewsMada
Raha nandeha tamin’ny herinandro teo ny fitsarana ny raharaha fangatahan’Andrianarimiadana Alphonse, izay andry iankinan’ny « zanak’i Masoandro », hiverina any amin’ny karieran’Anjozorobe, fantatra amin’izao fa ny alarobia ho avy io no hivoaka ny valin’izany fitsarana izany.
Raha tsiahivina, iray volana taty aorian’ny nivoahan’ny didim-pitsarana manatsahatra ny asan’izy ireo sy mandroaka azy ao amin’io kariera io vao nangataka fampitsaharana ny fampiharana izany didim-pitsarana izany izy ireo. Nandalo tao amin’ny filoha voalohan’ny fitsarana ambony ity raharaha ity ka dia nahanton’io filoha voalohany io izany didim-pitsarana izany. Araka ny fantatra anefa dia didy efa nampiharina io naverina nahantona io indray.
Araka izany, taorian’iny tsy fanarahan-dalàna voalohany iny, mbola maro ny olana hitranga any amin’ny karieran’Anjozorobe raha toa ka averin’ny fitsarana any an –toerana ireto olona efa nisy olana tany ireto. « Mila andrasana tapitra avokoa ny fitsarana ny votoatin’ity raharaha ity, izay raha ny tokony ho izy mbola misy fitsarana maromaro satria teo ny resaka filazan’ny ankilany fa misy hosoka ny taratasy nampiasaina, teo ihany koa ny momba ny nahafaty ilay zandary tany an-toerana, ny mikasika ny fampiharana ilay didim-pitsarana nivoaka tamin’ny volana aprily 2016. Rehefa vita ireo fitsarana rehetra ireo vao mazava ity raharaha ity ka anapahan’ny fitsarana ny momba ny hoe iza no olona tokony hiasa ao amin’ny kariera. Mbola mandalo amin’ny firesahana amin’ireo olobe ao an-tànana indray avy eo satria efa roa izay ny olona maty, avy amin’ny andaniny sy ny ankilany tao amin’ity toerana ity », hoy ny nambaran’ny mpahay lalàna iray, tsy nety nitonona anarana, mahafantatra tsara ny momba ity raharaha ity.
Araka ny fanidinihiko azy, hoy ihany izy, mbola marobe ireo olona mila henoin’ny fitsarana mikasika ity raharaha ity ka tsy misy mahamaika ny fanapahana sahady ny olona hiasa ao amin’ny kariera. Vao maika hanasaro-javatra mety hiteraka korontana mihitsy aza ny fandraisany izany fanapahan-kevitra izany.
Araka izany fanazavana izany, ho hita amin’ny alarobia ho avy izao ny tena fangaraharahan’ny fitsarana manoloana ity raharaha ity. Mbola tantara mitohy ny momba ny karieran’Anjozorobe hatreto.